Tetikasa Gutenberg, mahita e-boky maimaim-poana | Ireo mpamaky rehetra
Irene Benavidez | | eBooks
Ataoko an-tsaina fa ny ankamaroanareo dia efa mahalala azy, fa ho an'izay tsy mahalala kosa dia hanome hevitra kely aho: ny Tetikasa Gutenberg dia iray amin'ireo tetikasa lehibe indrindra an'ny fanangonana sy fizarana boky ho an'ny daholobe. Niasa nanomboka ny taona 1971 tamin'ny fikasana hanangona ireo bokin'ny sehatra ho an'ny daholobe (ireo izay tsy manana zon'ny mpamorona satria efa lany daty na noho izy ireo tsy mbola nanana izany) ary manome azy ireo ho azon'ny mpampiasa betsaka indrindra.
Mandrafitra ny Project Gutenberg izy ireo izao boky mihoatra ny 40.000, ny ankamaroany dia amin'ny teny anglisy (34.498), saingy misy ihany koa ny famoahana betsaka amin'ny fiteny sinoa (406), alemanina (932), frantsay (2.144), italianina (359), espaniola (343), portogey (539) ary fiteny maro hafa, ao anatin'izany ny Esperanto (84).
Izy io dia antsoina hoe Johannes Gutenberg, mpamorona ny milina fanontam-pirinty mihetsika izay, tamin'ny 1450, no nanamora ny famoahana ireo boky "indostrialy". Nahazoana namorona ny milina fanontana mitombo isa ny olona mahazo boky fa, mandra-pahatongan'izany, dia efa azon'ny olom-bitsy vitsivitsy ary, vokatr'izany, ny fiparitahan'ny kolontsaina lehibe kokoa (tsara, ndao tsy hanitatra, boky mbola "entana lafo vidy").
Miatrika tetik'asa misy efa misy (toy ny 24Simbol, hanome ohatra vao haingana), raisina ho toy ny referansa ny manamora ny fidirana amin'ny boky sy ny fanaparitahana ny kolontsaina, ary miandrandra ny fisian'ny fidirana an-tserasera amin'ny tambajotra, Michael Hart dia nandray ny dingana voalohany mankany amin'ny famoronana ny Project Gutenberg miaraka amin'ny nomerika ny Fanambarana ny fahaleovantenan'i Etazonia. Aza adino ny zava-misy fa, tamin'ny 1971, ny fanaovana nomerika dia mitovy amin'ny fandaniana fotoana be dia be amin'ny fitendrena ny keyboard mba hanovana ny lahatsoratra ho rakitra komputer. Ny fanamafisana ny scanner sy ny OCR dia nanamora tokoa, araka ny eritreritrareo, ny fizotry ny fanitarana sy ny fanamafisana ny tetikasa.
Mandray anjara amin'ny Project Gutenberg mpilatsaka an-tsitrapo an'arivony izay miasa amin'ny fanaingoana, famerenana ary famoahana boky, miaraka amin'ny tanjona (araka ny efa nolazaiko) hametraka ny kolontsaina ho an'ny olona betsaka araka izay tratra. Amin'izany fomba izany, ny boky rehetra izay tafiditra ao amin'ny tranonkalan'ny Gutenberg Project dia azo zaraina tsy misy karazana fetra raha mbola voatazona ny fitarihana ny tetikasa ary tsy miovaova ny atiny.
Tamin'ny raki-tsoratra ihany no nahitana ireo boky ireo, saingy, tamin'ny fivoaran'ny famakiana nomerika, nampidirina ireo endrika nomerika malaza indrindra: .epub, .html, .pdf na .mobi, ankoatry ny hafa. Ho fanampin'ireo boky niomerika, misy koa audiobooks, sary na mozika, eo ambanin'ny lohahevitra iray ihany: "tsy misy zon'ny mpamorona."
Amin'izany fomba izany, amin'ny tranokala Gutenberg Project dia afaka mahita azy ara-dalàna isika ny kilasy literatiora mahafinaritra rehetra: Shakespeare, Molière, Plato, Verne, Dickens, Dante, Cervantes, sns. Zavatra tena ilaina amin'ny fomba fijery fanabeazana; Raha ny marina, raha taona vitsivitsy lasa izay dia nanana mpamaky aho ary misy ifandraisany amin'ilay tetikasa dia ho voavonjy fitsangatsanganana maro tany amin'ny tranombokim-panjakana aho (hahitana The Quixote nindramina).
Izy io dia manana motera fikarohana tsara ary, rehefa hitanao ny motera fikarohana taloha, dia azonao atao ny mametraka sivana araka ny mpanoratra, lohateny, fiteny, lohahevitra, sokajy, karazana rakitra, sns. Manomboka eo dia mamporisika anao hifindra tranonkala aho, mitady ireo mpanoratra na boky mahasarika ny sainao sy hankafizinao.
Mazava ho azy fa izay maniry izany dia afaka hiara-miasa amin'ny Project Gutenberg amin'ny fomba isan-karazany, ohatra, amin'ny fanaovana nomerika, famerenana sy fanitsiana ireo boky (azo atao ihany koa ny manome fanomezana tsotra).
Tsy io tetikasa io ihany no misy. Ohatra, ny Tranomboky ny Siansa izay, araky ny anarany, mifantoka amin'ny famoahana siantifika sy ara-pitsaboana na ny Tranonkala virtoaly Miguel de Cervantes izay ahafahantsika miditra malalaka amin'ny famoahana boky Espaniola sy Amerika Latina.
Fanazavana fanampiny - 24Symbol: tetikasa Espaniola eto amin'izao tontolo izao ny ebooks
Loharano - Tetikasa Gutenberg
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Software » eBooks » Tetikasa Gutenberg: e-boky amin'ny sehatra ho an'ny daholobe
Maritza perez dia hoy izy:
Mitady manerana ny kolontsaina 9780205780372
Valiny tamin'i Maritza Perez
Mitady ny fihetsem-po mandritra ny fiainana aho
M. Gloria Simonneau dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa nahita ny boky Richard Adams. Ny havoan'ny rano. Ary tsy hitako io.
Valiny tamin'i M.Gloria Simonneau
Resaka be dia be, fanazavana be dia be ary inona no "angatahina" RIEN DE RIEN, andao ho matotra ary valio ireo fanontaniana fa tsy misy doka liana na tsia
Inona avy ireo endrika ampiasaina amin'ny e-book?
24Symbol: tetikasa espaniola eo amin'ny tontolon'ny ebooks